LG W41 nwere ike ihu na onyonyo izizi ya: njirimara ẹdụk | Gam akporosis
A na-ahụ LG W41 na onyonyo izizi ya: ihe eji enyo enyo
LG W31, tinyere ụdị ya dị elu karị, nke bụ W31 +, malitere na ahịa na Nọvemba afọ gara aga, ihe dị ka ọnwa atọ gara aga. Ekwentị ndị a rutere dịka ndị dị n'etiti na ọnụ ahịa dị ọnụ ala, n'oge na-adịghịkwa anya, ha ga-enwe ndị na-anọchi ha, ma ọ bụ nke ahụ na-eme ka anyị chee echiche. ọhụụ ọhụrụ ahụ, nke nwere njikọ na LG W41.
Ama ozo a gha enwekwa uzo di elu. Otú ọ dị, ihe anyị maara ugbu a bụ naanị banyere nke a, LG W41, nke ahụ bụkwa ihe anyị ga-ekwu maka nke na-esote, ebe ọ bụ na agbapụwokwa ihe osise izizi nke ọdụ ahụ na-ekpughe ụdị ya na ọdịdị ya.
Nke a bụ ihe LG W41 dị
Dị ka ihe anyị nwere ike isi jiri anya na-ahụ anya na ihe osise nke ekwentị a, LG W41 bụ ama na-egosipụta usoro igwefoto quad. Ekwuru na isi ihe mmetụta ahụ bụ 48 MP, mgbe onye na-agba n'ihu nwere ike ịbụ mkpebi 13 ma ọ bụ 8 MP.
Igwe ntanetị dị n'etiti, dị ka a pụrụ ịhụ, agaghị enwe ụdị nhazi mmiri, mana ọ ga-enwe oghere n'akụkụ aka nri elu maka igwefoto selfie. Nke a ga-abụ teknụzụ IPS LCD na, ọ bụ ezie na ekwughi ihe ọ bụla gbasara diagonal ya, ọ ga-enwe nha 6.5, n'otu oge nke enyere mkpebi nke panel ahụ dị ka HD +.
LG W41 wepụtara
Amabeghị mgbe LG W41 ga-ebido, mana, nyere ozi enyochara, ọ nwere ike ịbụ na a ga-ebido igwe na-adịghị anya. Ihe ọzọ bụ na ọnụahịa ya bụkwa ihe omimi, mana nke a nwere ike ịbịaru euro 200. Ahịa mbu ịnata ya ga-abụ India.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » A na-ahụ LG W41 na onyonyo izizi ya: ihe eji enyo enyo
Vivo X50 na-enweta Funtouch OS 11 update na gam akporo 11
Ihe kacha mma Valentpo appsbọchị ngwa maka gam akporo